Wararka - Wax badan oo ku saabsan suufka xayawaanka rabaayada ah / suufka eyda?
Waqti intee le'eg ayaan seexiyaa ilmahayga?
Waqtiga hurdada: Wakhtiga jiifka oo go'an ayaa qof walba u sahlaya hagaajintiisa iyo tababarka guriga.Dhib ma laha haddii ay tahay 8-da fiidnimo ama saqda dhexe, waa haddii ay noqoto mid joogto ah.U gee sanduuqiisa oo ku caawi inuu dejiyo habeenkii.
Maxaan buufin karaa si eygeyga uga ilaaliyo inuu ku fiiqo guriga?
Ka bilow inaad ku darto biyahaaga dhalada buufinta.Marka xigta, ku dar 2 qaado oo khal cad oo la jarjaray.Ugu dambeyntii, ku dar 20 dhibcood oo saliid lagama maarmaan ah.Ku buufi meel kasta oo aadan rabin in eeygaaga u dhawaado.
Immisa suuf ah ayaan dhigayaa?
Ka dib markii ay dhowr maalmood dhaafto oo ay hesho fikradda, ka saar 1-2 pads.Ka saar suufka dhawrkii maalmoodba mar ilaa hal kaliya laga tago.Waa inay fahanto, laakiin haddii ay isticmaasho dabaqa qaawan, dib u bilow.Khasaaruhu aad bay u fiican yihiin in yoolkaagu ugu dambeeyaa yahay in eygaaga uu ganacsigiisa ku sameeyo bannaanka inta lagu jiro socodka iyo wakhtiga ciyaarta.
Waqtiga boostada: Meey-31-2022
suufka nadaafadda 245mm, suufka Nadaafadda, Lady Pads, Tuwaalada Nadaafadda ee Haweenka Jilicsan, suufka Nadaafadda Dumarka, Ion Napkin Fayadhowr Xun,